AUTOCAD ကို INSTALL လုပ်နည်း - AUTOCAD - 2019
တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာ AutoCAD Installing
သငျသညျကို Samsung ML-1210 ပရင်တာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စတင်ခင်မှာ, သငျသညျကိုသူ့အဘို့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင့်လျော်သောယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါဖို့လိုပါတယ်။ ဤသည်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဆောင်းပါးမှာတော့ဒီပစ္စည်းကိရိယာများမှဖိုင်များကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့မရရှိနိုင်သမျှသောရွေးချယ်မှုများကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ပရင်တာကို Samsung ML-1210 များအတွက်ယာဉ်မောင်း Download လုပ်ပြီး install
installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိုသို့မှန်ကန်သောနှင့်လတ်ဆတ်သော software များကိုတွေ့ပါမှသာအရေးကြီးပါတယ်, ရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါဘူး။ ပင်တစ်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ထောက်ပံ့ပေးညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်ဤတာဝန်နှင့်အတူ။
ရုံကားမောင်းသူအပါအဝင်ပရင်တာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မျှလည်းမရှိတရားဝင် website တွင်ဒီတော့ထုတ်လုပ်သူ, ML-1210 စက်ပစ္စည်းအတွက်ထောက်ခံမှုရပ်စဲတော်မူကြောင်းကိုမှတ်သားချင်တယ်။ ကျနော်တို့ကတခြားရွေးချယ်စရာ software ကိုဒေါင်းလုဒ်၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုပါသည်။
Method ကို 1: HP ကကနေတရားဝင် utility ကို
သင်သိသည့်အတိုင်း HP ကကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက် software ကို download လုပ်ပါမှအရာကနေတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် Samsung မှအပေါငျးတို့သပရင်တာနှင့် MFPs ဖို့အခွင့်အရေးများဝယ်လျက်ရှိသည်။ ပြီးသားအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ထားပြီးအဖြစ်သို့သော်, ML-1210 မပံ့ပိုးပါ။ HP ကဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မြှင့်ထံမှတရားဝင်အစီအစဉ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်အောင်မြင်ကြောင်းအာမခံချက်ကိုမပေးနိုငျပါ - သင်ကြိုးစားနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာ။ သင်ဤနည်းလမ်းကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားချင်လျှင်, ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
HP ကပံ့ပိုးမှုလက်ထောက် Download
ဆော့ဖ်ဝဲကို download စာမျက်နှာကိုသွားပါနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာကကယ်ဖို့သင့်လျော်သော button ကို click လုပ်ပါ။
Installer ကိုဖွင့်ပါနဲ့နောကျ window ကိုသွားရောက်လည်ပတ်မည်။
ကျွန်တော်တို့သည်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုသူတို့ကိုလက်ခံပေါ်တွင်ကလစ်ဖို့အကြံပေး "Next ကို".
HP ကပံ့ပိုးမှုလက်ထောက်အဆိုပါ PC မှာ install လုပ်ပြီးသားအဖြစ်, ထို့နောက်သူကဖြန့်ချိခြင်းနှင့်မွမ်းမံမှုများအဘို့အစကင်ဖတ်စစ်ဆေးတိုက်ရိုက်သွားပါမျှော်လင့်ထား။
သင့်ရဲ့ device ကိုအတူအပိုင်းမှာတော့ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အပ်ဒိတ်များ".
အဆိုပါယာဉ်မောင်းကိုအပ်ခဲ့ကြပါလျှင်, ယခု, သင်ပရင်တာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်စတင်နိုင်ပါသည်။ Computer ကို restart လုပ်လိုက်ပါကပစ္စည်းကိရိယာများပါဝင်သည်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်, မလိုအပ်ပါဘူး။
ယခင်နည်းလမ်းကိုမဆိုရလဒ်များကိုဆောင်ကြဉ်းပါဘူးဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးသငျသညျ fit ပါဘူးရှိရာကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်သင်တို့အထူးအစီအစဉ်များနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အကြံပြုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲ, အဆိုပါချိတ်ဆက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အရံပစ္စည်းတစ်ခုအော်တို scan ကထွက်သယ်ဆောင်ပေးသောပြီးနောက်ဝန်နှင့်ယာဉ်မောင်းတတ်၏။ သင်တစ်ဦးကို PC device ကိုချိတ်ဆက်ဖို့စတင်ပါ, အဲဒီနောက်ထိုအဆော့ဖျဝဲတစျခုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုမှကိုယ်စားလှယ်များစာရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်အခြားဆောင်းပါး၌တွေ့နိုင်ပါသည်။
သင်ဤနည်းလမ်းကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, DriverPack Solution နှင့် DriverMax အစီအစဉ်ကိုကြည့်ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအထက်ဖော်ပြပါဆော့ဖျဝဲ၏လုပျငနျးအတှကျအသေးစိတျလမျးညှနျခဖြစ်ကြသည်။ ပရင်တာဒရိုင်ဘာကို install လုပ်ဖို့မဆိုအခက်အခဲမရှိပဲမှသူတို့နှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။
DriverPack Solution ကိုအသုံးပြုပြီးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းကို update လုပ်နည်း
Search နဲ့ကားမောင်းသူ installation ပရိုဂရမ် DriverMax
Method ကို 3: Samsung က ML-1210 ၏ ID ကို
အဆိုပါအစီအစဉ်၏ဒီဇိုင်းကိုအဆင့်မှာပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအပိုင်းအစဟာ operating system ၏မှန်ကန်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာထွက်သယ်ဆောင်သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ကုဒ်, တာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သော ID ကိုကိုင်ဆောင်သူများအတွက်ထုတ်ကုန်အထူးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်တစ်ဦးသင့်လျော်သောယာဉ်မောင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း ID ကို Samsung က ML-1210 ဖြစ်ပါသည်:
ဒီခေါင်းစဉ်တွေ့ဆုံအောက်က link ကိုပေါ်မှာငါတို့စာရေးသူအနေဖြင့်အခြားပစ္စည်းပေါ်မှာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့။
Method ကို 4: Built-in Windows ကို tool ကို
တစ်ခါတစ်ရံချိတ်ဆက် device ကို OS ကို windose သို့မဟုတ်အလုပ်တစ်နည်းနည်းနဲ့မမှန်ကန်ကြောင်းအတွက်အလိုအလျှောက်တွေ့ရှိရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အဘို့အ built-in ရှိသည်ဟုကားမောင်းသူ update ကိုသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလိမ့်မည်။ ဘာသာရပ်ပရင်တာအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြန့်ချိခဲ့သည်ကြောင်း, သို့သော်မှတ်ချက်, ဤနည်းလမ်းကိုအမြဲတမ်းကိရိယာတွင်ပြသသည်မဟုတ်, အထူးသဖြင့်အခါ, အလုပ်မလုပ်ပါဘူး "Device Manager"။ ထိုကွောငျ့, ဤ option ကိုသာအစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်အသုံးပြုရန်ရန်သေချာစေပါ, ဒီဆောင်းပါးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အပေါင်းတို့၏အနည်းဆုံးထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ Built-in ကို Windows ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသုံးပြီးယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ညွှန်ကြားချက်ချထားအောက်ပါ link ကိုကြည့်ပါ။
ယနေ့ကြှနျုပျတို့ကုမ္ပဏီ Samsung ကမှအ ML-1210 ပရင်တာဆော့ဝဲရှာတပ်ဆင်ရန်သူအပေါင်းတို့ကိုရရှိနိုင်ပါနည်းလမ်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်။ ကျနော်တို့သင်ကိုယ်တိုင်သင့်တော်မူကွဲကောက်ယူခဲ့ကြပြီးတပ်ဆင်အောငျမွငျခဲ့ကွောငျးကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။